AKHRISO: Dacwad laga gudbiyay kursiga HOP#166 oo doorashadiisu ka dhacday Garoowe – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Xafiiska Difaacaha xaquuqul Aadanaha Puntland, ayaa u gudbiyay Guddiga xalinta khilaafaadka Doorashooyinka dalka, cabashada Bashiir Warsame Maxamed, oo kamid ahaa musharrixiintii kursiga summadiisu tahay HOP#166.
Waraaq kasoo baxday Xafiiska Difaacaha xaquuqul aadanaha Puntland, ayaa lagu sheegay in kursiga HOP#166 oo doorashadiisu dhacday 22, bishan Janaayo (sabtidii), uuna ku guuleystay Gen. Axmed Taajir, si baalmarsan habraacyada doorashada looga hor istaagay Bashiir Warsame, xaquuqdiisii muwaadin, ee ay in la dooran karo, waxna uu dooran karo.
Sidoo kale, Difaacaha xaquuqul Aadanaha Puntland ayaa ugu baaqay GXKHDD in looga baahan yahay inay si wanaagsan u gutaan waajibaadka saaran,
Saddexdii kun ee doolar (ee gal furashada) ma bixiyey dacwooduhu?!
𝙊𝙊 𝘿𝘼𝘿𝙆𝘼𝙉𝙄 𝙈𝘼 𝙒𝘼𝙓𝘼𝙔 𝙒𝘼𝙓 𝙆𝘼 𝙎𝙐𝙂𝘼𝙔𝘼𝘼𝙉 𝙍𝙊𝙊𝘽𝙇𝙀 𝙃𝙄𝙄 𝙃𝙐𝘽𝙆𝘼 𝙇𝘼𝙂𝘼 𝘿𝙃𝙄𝙂𝘼𝙔 𝙈𝙄𝙎𝘼𝙉𝘼 𝙈𝘼𝘼𝙈𝙐𝙇 𝙂𝙊𝘽𝘼𝙇𝙀𝙀𝘿 𝙔𝘼𝘿𝙐𝙉𝘼 𝙂𝙀𝙀𝘿 𝙆𝙐 𝙓𝙄𝙍𝙏𝙀𝙀𝙉 𝙀𝙀 𝙔𝘼𝘼𝘽𝘼𝙉 𝙊𝙊 𝘼𝙁𝙆𝙄𝙄 𝘽𝘼𝘼 𝙅𝙐𝙐𝙌𝘿𝘼 𝙂𝘼𝘽𝘼𝙔 . 𝙒𝘼𝙓𝘽𝘼 𝙄𝘿𝙄𝙉 𝙌𝘼𝘽𝘼𝙉 𝙆𝘼𝙍𝙄 𝙈𝘼𝘼𝙔𝙀𝙀 𝙔𝘼𝘼𝙉 𝘿𝘼𝘾𝘼𝙍𝙊𝙊𝙉, 𝙀𝙀 𝙓𝙄𝙎𝘽𝙄𝙂𝘼 𝙉𝘼𝘽𝘼𝘿 𝙄𝙔𝙊 𝙉𝙊𝙇𝙊𝙇 𝙀𝙀 𝙁𝘼𝙍𝙈𝘼𝘼𝙅𝙊 𝘼𝙈𝘼 𝘿𝙀𝙉𝙄 𝙈𝙄𝘿 𝙆𝙊𝙊𝘿 𝙃𝘼𝘿𝘼𝘼𝘿𝘼𝙉 𝘼𝙃𝙀𝙔𝙉 𝙄𝙎𝙆𝘼 𝘼𝘼𝙈𝙐.
mandho meel fariiso generaalku kaa khibrad badan waana nin halyeeya dad iyo dalba wax traaya ninkii afar sano qaata yuu soo noqon
Guddiga GXKHDD, haddii aysan magac u yaal ahayn, waa iney ku dhawaaqaan in mar labaad la qabto doorasho haddii ay xaqiiqa noqoto caddaymaha dacwadan ku xusan.
Waa arrinta labaade, waa in la caddeeyaa cidda ka mas’uulka ah xad-gudubkaas aadka u weyn iyo waxa ay u cuskadeen xeer ahaan ama sharci ahaan.